Sherwood: Sandro Kuma Soo Baxayo Tottenham Ee Meel Kale Ha Raadsado
HomeEnglandSherwood: Sandro Kuma Soo Baxayo Tottenham Ee Meel Kale Ha Raadsado
Tababaraha kooxda Tottenham, Tim Sherwood ayaa sheegay inaan ciyaaryahankiisa Sandro lahayn qaab ciyaareedkii kooxda Spurs uu ugu ciyaari lahaa, kadib markii laacibka reer Brazil uu ka reebay xulkii 3-1 ka kaga adkaatay Fulham.
Sandro ayaa dadka ku xidhan bartiisa Twitter ka ugu qoray inaanu dhaawac uga hadhin kooxda ka hor intii aanay bilaabmin kulankii Fulham, ciyaarta dhexdeediina laga waayay oo uu ka dhex muuqan waayay laacibkan 25 jirka ahi.
“Waxa uu sheegay waa sax, Kuma jiro xulka wakhti xaadirkan. uma malaynayo inuu leeyahay xirfadii uu kaga mid noqon lahaa kooxda xiligan la joogo,” ayuu yidhi tababare Sherwood.
“Marka uu i tuso inuu leeyahay ama aan arko inuu xirfadaas ay ciyaaryahanada kale leeyihiin leeyahay isna, dib baan ugu yeedhi doonaa. laakiin imika, malaha qaab ciyaareedkii kooxdayada sidaas darteedna albaabku wuu u furan yahay.
“Waanu ka bixi karaa oo uga wareegi karaa kooxda , meel kasta oo uu doono, wax dhib ah oo uu igu hayaa ma jirto, waanu ku saxan yahay waxa uu Twitter kiisa ku soo qoray. Fariintii uu doonana wuu ku qori karaa.
“Waa ka daacad hadalkaasi, beena kumuu darin, igama mudna qadarin la’aan aniga.”
Sandro ayaa isla markiiba isna soo dhigay Twitterkiisa markii uu arkay hadalada tababaraha, fariimo qosol u dhigan oo inta badan bulshada net ka isticmaashaa qoraan oo u dhignaa sidan : “Lol lol lol …!”
Xidigan qaranka Brazil ayaa 23 kulan u saftay kooxda Tottenham xili ciyaareedkan.